Yekushandisa Nongedzo | Ryuko Chirangaridzo Horo
Kune mutserendende padivi pematanho pamusuwo, pane chimbuzi chakawanda, pane cheya wiricheya, uye AED yakaiswa.
Kushandiswa kwakasiyana siyana
Mari yekugamuchira inoregererwa kuti ishandiswe sechikamu chedzidzo yechikoro
Elementary uye junior vadzidzi vechikoro chepamusoro uye vatungamiriri vavo mahara, uye vadzidzi vechikoro chesekondari nevatungamiriri vavo vanobvumidzwa pahafu yemutengo wezana zana.
Ndapota taura nesu sezvaunenge uchida kushandisa kare.
Yemahara kune vanhu vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa (humbowo hunodiwa)
Sezvo vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu zvichikwira (chitupa chinodiwa) mahara, vanhu vazhinji vanouya kumuyuziyamu kuzorora kwezuva rebasa.Pakadaro, vachengeti vanogona zvakare kupinda musimamende mahara.Ndapota taura nesu zvisati zvaitika.
Uye zvakare, isu tinogamuchirawo kuchengetedza kweboka
Mari yeboka (vanhu makumi maviri kana kupfuura) ndeye 20 yen yevakuru. Kugamuchirwa kuri mahara kune avo vanopfuura makore makumi matanhatu nemashanu nekuburitsa zvitupa zvakasiyana.Uye zvakare, mune izvo zviitiko zvekuchengetedzwa kweboka, isu tinogona kupa gadheni kutungamira uye tsananguro dzakareruka dzemabasa kuboka rakagadzirisa, saka ndokumbirawo utibate pamberi.